isku duwaha caafimadka ee degmada saylac MR:YUUSUF CAWAALE DAAHIR OO noqdey Ber xumo loo dhashiyo iyo bilaayo gaar waayaan. by Ahmed Jama | Gabiley News Online
isku duwaha caafimadka ee degmada saylac MR:YUUSUF CAWAALE DAAHIR OO noqdey Ber xumo loo dhashiyo iyo bilaayo gaar waayaan. by Ahmed Jama
September 25, 2018 - Written by maxamed jeex
Isku duwaha caafimadka ee degmada saylac oo si badheedha u kala soocaya dadka degaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ee degmada saylac
Si loola jaanqaado dunida maanta horumartay waxaa loo baahan yahay marka hore wasiirka wasaarada caafimaadka JSL inuu xil kaqaadis ku sameeyo isku duwaha caafimadka ee degmada saylac yuusuf cawaale Daahir oo ah sunta ka dhaxwada qabyaalada baahsan bahda caafimadka ee degmada saylac.
Mudane wasiir ninkaas isku duwaha salal ah oo asal ahaan ku dhashay itoobiya degaan ahaana ka soo jeeda kililka shanaad aqoon ahaana caafimaadka aan waxba ka aqoon lkn ah nin ay qabyaaladu madaxmartey sidaasi darteed mudane wasiir waa inaad talo adag aad ka qadaa.
Mudane wasiir wax yaalaha lagu arkey waxaa kamid ah kala sooca uu ka wado gobolka salal isagoo ka keeney itoobiya dad ay isku qabiilyihiin oo layidhaahdo barbaarta dhalinta ciise ku waasoo laga keeney dire dawa,iyadoo dadkii degaanka ahaa ee gadabuurssi aan shaqada la qorin hadaba wasiir ninkaasi waxa uu meesha ka wadaa waa ka waaweyn ee arintaa intaaney wax dhicin u yeelo fiiro gaar ah.
Wasiirka caafimadka Waxaan leeyahay ninkaa ah isku duwaha ee degmada saylac Yusuf cawaale daahir wuxuu rabaa inuu kiciyo qabiilka ugu badan gobolka salal ee gadabuurssi kadib markuu keeney ciise aan u dhalan degmada saylac taasi oo aan ka cabsi qabno in halkaasi ay ka dhacaan iska hor,imaad keena dhimasho iyo burbur ku yimaada bulshada wada deganka degmada saylac .
Hadaba wasiirka caafimaadka waxaan leenahay haddii uu joojin waayo qabyaalada qaawan ee uu ku dhaqmaayo isku duwaha caafimadka ee degmada saylac dadka aan u dhalan degaanka ee uu ka keenaayo Dire,Dawa inaan marnaba loo dulqaadandonin waxaa uu wado Yusuf cawaale daahir oo aan naqaan wuxuu yahay..